Puntland Oo Shuruud ku Xirtay Shirka Uu Xalay ku Baaqay Farmaajo. – Heemaal News Network
Wasiirka oo la hadlay BBC-da waxaa uu sheegay in Farmaajo uusan jirin Baarlamaanka uu hortago oo Go’aan gaari karo ,,isla markaana ay yihiin kuwo laba dhinac u kala jaban oo ay kala hoggaaminayaan Maxamed Mursal iyo Cabdi Xaashi.
” Baarlamaanka iyaga ayaaba shaci aheyn oo waqtigooda dhamaaday muddana ma kordhin karaan, iyana ma kordhisan karaan micnana ma soo kordhineyso hadii uu Madaxweynaha hortago ayuu yiri, Wasiirka Warfaafinta Puntland.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in puntland ay diyaar u tahay shirar kasta oo looga hadlayo Arrimaha Soomaaliya, balse aysan tageen ilaa la helo damaanad Beesha Caalamk ah.
Hadalka Wasiirka Warfaafinta Puntland ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli xalay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in lagu laabanayo wada-hadalladii doorashada iyo heshiiskii doorashada.
RW Rooble Oo ka soo Horjeestay Muddo Kororsiga, kuna Dhawaaqay Doorasho.